अष्ट्रेलियामा स्थानीय स्तरमा कोरोना संक्रमण शुन्य, कसरी नियन्त्रणमा आयो ?
सिड्नी । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९)को संक्रमण नियन्त्रणमा अष्ट्रेलिया सफल भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा अष्ट्रेलियामा स्थानीय स्तरमा भेटिएका संक्रमितको संख्या शुन्य रहेको छ । देशभर थप ५ जनामा संक्रमण पुष्टि भए पनि उनीहरु विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरु रहेका छन् । उनीहरु होटेल क्वारेन्टिनका रहेका छन् ।
अष्ट्रेलियाका केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री जर्ज हन्टले स्थानीय स्तरमा संक्रमण फैलिएको नभेटिएको जनाएका हुन् । नेशनल इन्सिडेन्ट सेन्टरको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै हन्टले गत जुन ९ देखि पहिलो पटक देशमा स्थानीय स्तरमा संक्रमित नभेटिएको बताएका हुन् । उनले यो सफलताको लागि सबै स्वाथ्यकर्मी, स्वयंसेवक तथा सम्पूर्ण अष्ट्रेलियन नागरिकहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
गत फ्रेब्रुअरी १५ मा अष्ट्रेलियामा पहिलो पटक १५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । मार्चको पहिलो साताबाट उकालो लाग्न थालेको कोरोना संक्रमितको ग्राफ अक्टोबरको अन्त्यतिर लगभग नियन्त्रणमा आएको छ । अष्ट्रेलियामा जुलाई ३० मा सर्वाधिक ७२१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि संक्रमितको संख्या निरन्तर ओरालो लागेको थियो । करिब साढे २७ हजार जना संक्रमित हुँदा जम्मा ९०७ जनाले ज्यान गुमाए । २५ हजार ३०० भन्दा बढी कोरोना संक्रमणबाट निको हुँदा हाल १ हजार ३०० भन्दा बढी उपचारको क्रममा रहेका छन् । अष्ट्रेलियामा सेप्टेम्बर ४ मा सर्वाधिक ५९ जना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो ।
कसरी नियन्त्रणमा आयो कोरोना ?
अष्ट्रेलियाले कोरोना नियन्त्रणको लागि अथक प्रयास गरेको छ । केन्द्रीय सरकार तथा राज्यले नियन्त्रणको लागि परीक्षणको दायरालाई व्यापक बनाए । अष्ट्रेलियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार देशभर झण्ड ८८ लाख कोरोना परीक्षण भएको छ । परीक्षण गरिएका मध्ये १ प्रतिशतभन्दा कममा संक्रमण पुष्टि भएको छ । भिक्टोरिया राज्यमा मात्रै साढे ३१ लाख ७४ हजार भन्दा बढी परीक्षण गरिएको थियो । त्यस्तै, न्यु साउथ वेल्स राज्यमा साढे ३० लाखमा परीक्षण गरिएको थियो ।
कोरोना नियन्त्रणको लागि सबै तहका सरकारले अत्यावशेक बाहेकका सेवा बन्द गरेर प्रभावितहरुलाई राहतको व्यवस्था गरेको थियो । सोही कारणले गर्दा सरकारको कामलाई सबैले साथ दिएका थिए । प्रभावित राज्यका सीमाहरु बन्द गरिएका थिए । अहिले ती सीमा नाकाहरु खुकुलो बनाइएको छ ।
अष्ट्रेलियाले कोरोनालाई नियन्त्रणमा त लिएको छ तर, अर्को ‘वेभ’को लागि पनि तयारी छ । यसअघि फैलिएको संक्रमणको विश्लेषण गरिरहेको अष्ट्रेलियाले अर्को पटकको लागि अझै प्रभावकारी तरिकाले नियन्त्रण गर्ने जनाएको छ । आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका पनि बन्द गर्ने तयारीमा अष्ट्रेलिया छ । तर, अहिले फैलनै नदिने गरि सावधानी अपनाइएको छ । कसैलाई शंका लागेमा तुरुन्तै परीक्षण गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, कुनै राज्यमा प्रवेश गरेपछि संक्रमणको आशंका लागेमा सम्पर्क गर्न भन्ने मोबाइल सन्देश हरेकले पाउने गरेका छन् । यसको लागि राज्य सरकारको स्वास्थ्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाइएको छ ।
भेनेजुएलाको सर्वोच्च अदालतद्वारा ६ जना पूर्व अमेरिकी नागरिकलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल सजाय
एजेन्सी । भेनेजुएलाको सर्वोच्च अदालतले छ जना पूर्व अमेरिकी नागरिकलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कैँदको फैसला सुनाएको छ । भेनेजुएलाको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सो सजायँ सुनाएको अधिकारीले जनाएका छन् ।